Izinsiza kusebenza Zezokwelapha | I-China Abenzi Bezinto Zokwelapha Nezokwelapha
I-DXQ series multifunction rack washer-disinfector yenzelwe ngokukhethekile izinto zelager esibhedlela ezifana nombhede wesiguli, inqola kanye ne-rack, isitsha njll. Inezinzuzo zomthamo omkhulu, ukuhlanza ngokuphelele kanye ne-automation ephezulu. Ingakwazi ukuqedela yonke inqubo kubandakanya ukuwasha, ukugeza, ukubulala amagciwane, ukomisa njll.
I-DXQ series multifunction rack washer-disinfector ingasetshenziswa emkhakheni wezokwelapha nowezempilo noma ilabhorethri yezilwane ukugeza nokuhlanza amagciwane izinto ezifanele kubandakanya lonke uhlobo lwetroli, ibhasikidi lepulasitiki, isitsha sokuhlanza kanye nesivalo salo, itafula lokuhlinza nezicathulo zokuhlinza, amakheji elebhu yezilwane, njll.
Ama-Cleaning Ultrasonic Wokuma kwamahhala
I-QX series washer ultrasonic ibalulekile umshini wokuwasha ku-CSSD, igumbi lokusebenza kanye ne-laboratory.SHINVA inikeza izixazululo ezihlanganisiwe ze-washer ultrasonic, kufaka phakathi ukuwasha kokuqala, ukuwasha kwesibili nokuwasha okujulile okunemvamisa ehlukile.
Ithebula Top Ultrasonic Washers
I-washer mini ultrasonic isebenzisa isignali ephezulu ye-oscillation, ethunyelwa i-generator ye-ultrasonic, iguqula isignali ephezulu ye-oscillation mechanical futhi isakaze kwisisombululo se-ultrasonic medium-yokuhlanza. I-ultrasonic isakazeka phambili kusixazululo sokuhlanza ukukhiqiza izigidi zamabhamuza amancane. Lawo maqamuza akhiqizwa endaweni engaphansi kwengcindezi yokudluliswa okuqondile kwe-ultrasonic ngenkathi kufakwa ngokushesha endaweni yengcindezi enhle. Le nqubo ibizwa ngokuthi yi-'Cavitation '. Ngesikhathi sokufakwa kwe-bubble, kwenziwa umfutho ophakeme ngokushesha futhi kuthinta izindatshana ukuvimbela ukungcola okunamathele ebusweni negebe lama-athikili ukufezekisa inhloso yokuhlanza.
Ukuze kuqinisekiswe umphumela wokuvala inzalo, kubalulekile ukugcina izinto ezizinzisiwe zomiswa. Ikhabethe lokomisa lezokwelapha le-YGZ lenziwa ukuhlangabezana nezidingo zangempela zokomisa izinto ezahlukahlukene ezibhedlela. Imikhiqizo yinhle ngokubukeka, iphelele ngokusebenza, ilula ngokusebenza. Zisetshenziswa kabanzi esibhedlela CSSD, amagumbi okuhlinza neminye iminyango.
I-YGZ-1600, i-YGZ-2000 Series
Izici zomkhiqizo we-Center-HGZ
■ Isikrini sokulawula ukuthinta umbala esingu-5.7-intshi.
Forming Igumbi elenza isakhiwo, elihlanzekile kalula ngaphandle kwezinsalela zamagciwane.
■ omnene ingilazi umnyango, kulula ukugcina ekamelweni izimo zangaphakathi.
■ Iphasiwedi ehlakaniphile yokukhiya ngogesi, iphephile futhi inokwethenjelwa.
■ Uhlelo lokugcina lokulenga lwama-endoscopes.
■ Izendlalelo ezine zibeka uhlelo lwehange, konke ukuvikela ukuvikela ama-endoscopes.
■ Isibani esikhanyayo se-LED, siphephile futhi sinokwethenjelwa, akukho ukukhiqizwa kokushisa.
Ukomiswa nokugcinwa kahle kwe-endoscope kubalulekile. ingxenye yenqubo yokuwashwa kwe-endoscope kanye ne-disinfection, ehlobene ngqo nokuphepha kwe-endoscope nokuphepha kweziguli.
123456 Okulandelayo> >> Ikhasi 1/12